Indlu Ephuzi Ehlathini - I-Airbnb
Indlu Ephuzi Ehlathini
Indlu esemaphandleni yonke sinombuki zindwendwe onguKamilla
UKamilla unezimvo eziyi-215 zezinye iindawo.
Le ntsapho ineminyaka ingumnikazi wale ndlu kwaye ngoku ungayisebenzisa nayo. Phantse ungazilahlekelwa phakathi kwemithi yeziqhamo ezindala egadini. Ungaqhuba enye yeebhayisekile nebhayisekile ehlathini ukuya kunxweme oluhle kwimizuzu elishumi (ngokukhawuleza endleleni, kodwa ingabi ntle kangako). Kukho indawo yokubasa umlilo, ityeya emnandi elangeni kunye nesibhakabhaka esiphithizelayo ebusuku. Ukucoca nezinto zebhedi ziqukiwe kwixabiso, ngoko vumela amahlombe akho ehle uze wonwabele.
Unokuba nesithandathu endlwini, kwaye ukuba kukho umntwana owongezelelweyo, useza kulunga. Kukho umatshini wokuhlamba izitya nowokuhlamba izitya. Istovu sentsimbi esidala siyasebenza, kodwa ungoyiki, kukho neoveni eqhelekileyo. Ayikho iTV, kodwa i-intanethi ekhawulezayo kunye nemidlalo yebhodi yabantu abathandanayo.
Kukho inethi yokuzikhusela kwiingcongconi phambi kweefestile kumagumbi okulala, ngoko iifestile zingavuleka ngobusuku obufudumeleyo ungakhange ungenise iintakumba.
Izitepsi eziya kumgangatho wokuqala ziyanyuka kwaye azizifanelanga amadolo eveki. Akukho mqobo wokhuseleko kubantwana abancinci. Umgangatho wokuqala ligumbi elikhulu elineebhedi ezimbini ezilala abantu ababini nebhedi enye. Akukho mnyango unokuwuvala usiya kwisitepsi, ngoko unokuva izandi zasekhitshini nakwigumbi lokuhlala xa ukumgangatho wokuqala.
Egadini, indawo endala itshintshwe yaba yindlu eyimfihlo egadini apho unokuthi zava okanye ulwe nomqamelo kuxhomekeka kwiminyaka yakho nakwiholide ozithandayo. Ayisiyo nxalenye yombutho wethu ongqongqo wokucoca, kodwa wamkelekile ukuyisebenzisa. Xa uhleli kwintente, unokuva abantu behamba endleleni ngamaxesha athile, kodwa akukho ngxolo.
Umbuki zindwendwe ngu- Kamilla
Inkonzo yokubuka iindwendwe yasekuhlaleni ilawula ukuhlala kwakho kwaye uza kufumana inombolo ethe ngqo kubo xa ubhukisha. Bakulungele ukukunceda xa kufuneka.